“Sida Ronaldo oo kale ayaan u tuuri karaa Laadadka Xorta ah (free-kicks).”. – Gool FM
“Sida Ronaldo oo kale ayaan u tuuri karaa Laadadka Xorta ah (free-kicks).”.
Byare October 3, 2017
(Manchester) 03 Okt 2017. Da’yarka u soo baxaya Manchester United Marcus Rashford ayaa sheegay inuu laadadka xorta ah u tuuri karo sida rugcadaagii hore ee Red Devils Cristiano Ronaldo balse uusan weli dadka tusin.
19-jirka ayaa xubin muhiim ah ka noqday Old Trafford tan iyo sidii uu safka hore u soo jabsaday labo sano ka hor.
Jose Mourinho ayaa masuuliyada Koornooyinka kooxda u gacan galiyay Rashford, isagoona durba kubbad joog sare ah u keenay Marouane Fellaini ciyaartii sabtida ay 4-0 uga adkaadeen Crystal Palace.
Yeelkeede, iyadoo ay jirto inuu hal free kick oo qura kooxda u dhaliyay kulankii Celta Vigo bishii April ayuu misane Rashford sheeganayaa in awoodiisa tuurista Laadadka Xorta ah ay u fiican tahay sida Ronaldo oo kale balse uu isku dayayo inuu maskaxdiisa wax kala yimaado.
“Maya dhabtii way ka duwan tahay, waxaan u tuuri karaa sida Ronaldo oo kale balse weli ma sameyn,” Rashford syaa sidaa ku waramay.
Cristiano Ronaldo ayaa ku caan baxay Laadadka xorta ah ee ceynkaa loo tuuro muddadii 6-da sano uu ku sugnaa Man United wuxuuna howshaasi ka sii watay gegada Bernabeu.
Arjen Robben oo beeniyay inuu dhaleeceeyay tababare Carlo Ancelotti
Tababaraha xulka Belgium oo beeniyay inuu qilaaf kala dhexeeyo kooxda Man city